Soo gudbinta - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
La Wadaag News, Kheyraadka, Dhacdooyinka & Aqoonta Barayaasha Nabadda ee Dunida
Ma haysaa warar, dhacdooyin, cilmi baaris, manhaj ama fikrado kale oo aad kula wadaagto Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada bulshada? Hadday sidaas tahay, fadlan soo gudbi mawduucaaga adigoo adeegsanaya midkoodna dhacdooyinka ama foomamka soo gudbinta maqaalka ee hoosta.
Fadlan dib-u-eegis ku samee shuruudaha dhajinta ka hor intaadan gudbin oo ka dooro qayb ka mid ah liiska hoose.
Xaaladaha badankood waxaan ansixineynaa qoraallada si cad u khuseeya oo u baahan kaliya tafatirka ugu yar adiga oo aan kula soo xiriirin Haddii aan su'aalo ka qabno, walaacyada khuseeya, ama u baahanno tafatirro waaweyn waan la xiriiri doonnaa.
U hubso in aad ku soo biir Ololaha Caalamiga ah isla markaana is-qor si aad uga hesho wargeysyadayada sanduuqaaga si aad u eegi karto qoraalkaaga isla marka uu si toos ah u hawl galo!
Shuruudaha Dhajinta Aasaasiga ah
Shuruudaha ugu muhiimsan ee ka mid noqoshada warsidaha ayaa ah mid ku habboon. Mudnaantayadu waa inaan soo bandhigno qodobbo iftiiminaya caqabadaha iyo guulaha haddii ay ka noqoto waxbarashada nabadda iyo siyaabaha ay waxbarashadu u korayso una horumarinayso adduunka. Waxaan sidoo kale ku darnaa wararka iyo ilaha la xiriira arrimaha rabshadaha ee barayaasha nabada ay tahay inay aqoon u yeeshaan si ay ugu daraan aqoontaan manhajkooda iyo fasaladooda.
Kahor intaadan gudbin tabarucaad, fadlan isweydii haddii soo gudbintaadu ay si cad ula xiriirto waxbarashada nabadda. Waxbarashada Nabadda waa goob ballaaran oo ka kooban shaqo iyo cilmi baaris dhowr qaybood oo la xiriira waxbarashada oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadanaha, hub ka dhigis, jinsi, isku dhac, rabshad la'aan, iwm.
Qaybaha soo gudbinta
Wararka & Aragtida
News: share maqaallada la xiriira horumarka waxbarashada nabadda ee adduunka oo idil
opinion: share maqaallada ra'yiga iyo tifaftirka la xiriira waxbarashada nabadda
Warbixinnada Waxqabadka: la wadaagaan warbixinnada ka soo baxa dhacdooyinka waxbarashada nabadda, tababbarka, iwm & joornaalada mararka qaarkood ka yimaada kooxaha kale ee u janjeedha waxbarashada nabadda
Digniinta Waxqabadka: share ogeysiisyada ku saabsan ololaha degdegga ah iyo / ama waqtiga xasaasiga ah, tartamada ama fursadaha maalgelinta
Manhajka: wadaaga manhajyada nabadda, muuqaallada, iyo agabka tababarka macallimiinta
Research: wadaagno cilmi baaris asal ah oo la daabacay oo ku saabsan waxbarashada nabadda
siyaasadda: wadaagaan wararka, articles, iyo dukumentiyada ku saabsan horumarinta siyaasadda waxbarashada ee la xidhiidha waxbarashada nabadda
Baro & Samee
Dhacdooyinka & Shirarka: wadaagaan macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka iyo shirarka la xiriira waxbarashada nabadda (fadlan u isticmaal foomka dhacdooyinka soo gudbintan)
Koorsooyinka Tacliinta: wadaagaan macluumaadka ku saabsan koorsooyinka tacliinta ee soo socda ee la xiriira waxbarashada nabadda (fadlan u isticmaal foomka dhacdooyinka soo gudbintan)
Barnaamijyada Waxbarashada: wadaagaan macluumaadka ku saabsan barnaamijyada tacliimeed ee waxbarasho ee waxbarashada nabadda (fadlan u soo gudbiso barnaamijyo tusahayaga "Halkee laga baran karaa Waxbarashada Nabadda")
Tababarro & Aqoon isweydaarsiyo: la wadaagaan macluumaadka ku saabsan kuwa aan aqoonta ahayn (aan shahaadada ahayn), aan rasmi ahayn iyo / ama tababarka aan rasmiga ahayn iyo fursadaha aqoon isweydaarsiga (fadlan u isticmaal foomka dhacdooyinka soo gudbintan)
Ololaha: wadaagno macluumaadka ku saabsan ololeyaasha u doodista ee khuseeya barayaasha nabadda
akhrinta (fadlan u isticmaal foomka dhacdooyinka soo gudbintan)
Webinars (fadlan u isticmaal foomka dhacdooyinka soo gudbintan)
Daabacadaha: la wadaag macluumaadka ku saabsan daabacaadaha cusub ee khuseeya goobta isla markaana ku baaqaya waraaqaha
Faallooyinka Buugga: la wadaag dib u eegista suugaanta muhiimka ah ee duurka
Shaqooyinka & Maalgelinta
Shaqooyinka: wadaagno dhajinta shaqada iyo fursadaha xirfadeed ee waxbarashada nabadda iyo dhinacyada la xiriira
Fursadaha Maalgelinta: la wadaag macluumaadka ku saabsan deeqaha iyo fursadaha deeqaha waxbarasho
Soo Gudbinta Jadwalka Dhacdada
Waxaad soo gudbin kartaa dhacdo, shir, webinar, ama koorso khadka tooska ah (wax kasta oo ka hooseeya qaybta "Baro & Samee") in lagu soo bandhigo jadwalka waxbarashadda nabadda adduunka.
* Haddii aad soo gudbineyso dhacdo fadlan ha isticmaalin foomka "soo gudbinta maqaalka" ee hoos ku qoran - tani waxay ka hortageysaa iyo / ama waxay sababi doontaa dib u dhac ku yimaada dhajintaada oo ka muuqata boggayaga.
Halkan guji si aad ugu soo gudbiso dhacdooyinkaaga la xiriira waxbarashada nabadda jadwalka taariikhda adduunka!
Soo Gudbinta Qodobka (1)
Macluumaadkaaga xiriirka waxaa looga baahan yahay dabagal ama su'aalo suurtagal ah. * Macluumaadkan laguma dari doono boostada.
Cinwaanka emailkaaga ee dabagalka.
Nooca Soo Gudbinta
Dhammaan soo gudbinta dib ayaa loo eegi doonaa loona habeyn doonaa kahor dhajinta. Haddii aan wax su'aalo ah qabno waan kula soo xiriiri doonnaa annaga oo isticmaaleyna macluumaadka kor ku xusan.
Qeybta Soo Gudbinta*
Fadlan eeg sharraxaadda. Xulo qaybta ugu habboon ee boostadaada liiska hoose.
Dooro category aDigniinta WaxqabadkaWarbixinnada WaxqabadkaFaallooyinka buuggaOlolayaashaCVFeaturesFursadaha maalgelintaJobsWarar & MuuqaalopinionSiyaasaddaPublicationsQuotesResearchDhalinta diirada la saaray
Maqaalka aad soo gudbineysaa miyaa horeba loogu daabacay barta internetka?*
maya - tani waa asalka asalkahaa
Fadlan bixi url-ka boostada asalka ah:*
Tusaale ahaan: www.peace-ed-campaign.org/news_article
Fadlan sheeg magaca qoraha asalka ah iyo magaca barta uu maqaalka markii hore ku daabacay.*
Fadlan isticmaal qaabkan: Qoraa. Daabacaha, taariikhda la daabacay. Tusaale: Waxaa qoray Tony Jenkins. Waqtiyada Waxbarashada Nabadda, Ogast 2, 2017.
Cinwaanka Maqaalka / Qoraalka / Sawirada
Cinwaanka Maqaalka / Boostada*
Fadlan soo jeedi cinwaan loogu talagalay dhajintaada. Waa inay si cad u muujisaa xoogaa muhiim u ah waxbarashada nabadda.
Qoraalka ugu muhiimsan ee Maqaalka / Boosta*
Haddii maqaalka horey loo daabacay fadlan hubso inaad nuqul ka samayso dhammaan qoraalka asalka ah halkan.
Fadlan bixi 1-2 jumlad oo gaaban oo kooban oo maqaalka ah. Soo koobiddu waa inay caddaysaa sida maqaalku ugu habboon yahay waxbarashada nabadda. Qayb ka mid ah qoraalkan waxa la isticmaali doonaa marka lala wadaagayo warbaahinta bulshada.
Fadlan tixgeli inaad ku darto sawir boostadaada.
Keliya soo gudbi sawirro aad fasax u leedahay inaad isticmaasho ama ku jira goobta dadweynaha.
Noocyada faylasha ee la aqbalay: jpg, jpeg, png, gif. file Title caption
Badbaadi oo Sii wad Goor dambe